Godaantonni 2,300 ol Yaman irraa Itoophiyaatti deebifamuufi - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Godaantonni wayita gara biyyaatti deebi'uuf qorannoo taasisaan
Dhaabbati Godaantotaa Idil-addunyaa (IOM) godaantota lammii Itoophiyaa 2300 ol Yaman keessatti hidhamanii jiran gara biyyaatti deebisuu eegale.
Lammileen kunneen hedduun isaanii Naannoo Oromiyaa irraa kan godaanan akka ta'an qondaalli IOM damee Yaman Oliviyaa Hiidan BBC'tti himaniiru.
Amma dura marsaa duraatiin godaantonni 120 ol Itoophiyaatti deebifamuu himaniiru.
Godaantonni kunneen buufataalee sadi, istaadiyeemii kubbaa miillaa lamaa fi kaampii waraanaa tokko keessatti hidhamanii akka jiraniifi, bakka jiraachuuf rakkisaa ta'edha jedhu Aadde Oliviyaan.
"Bishaan dhugaatii, tajaajilawwan qulqullina ofii eeguu, tajajila fayyaa, nyaataa fi wantoota kana fakkaatan argachuun lafa rakkisaa ta'e jiru" jedhu.
Namooti hidhamtoota kana eegan loltoota ta'uun isaanii ammoo rakkinicha hammaataa taasise jedhu.
"Istaadiyemii Adan keessatti warra hidhaman dawwachuuf yeroon dhaqetti rasaasni irra deddeebiin yeroo dhukaafamu dhaga'eera, namootni lama rasaasaan dhahamanii tokko qaamni isaa hojiin ala (paralysed) ta'uu gabaasni nu gaheera."
Dubartoota dabalatee dodaantota achitti hidhaman irratti sarbamni mirgaa adda addaa akka gahaa jiru quba qabaachuus dubbatu.
Sababa dhibee haqqeefi garaa kaasaatiin lammileen 14 lubbuu dhabuu isaaniis ni himu.
IOM dhaabbilee michoota isaa ta'an kaan waliin ta'uun gargaarsa namoomaa godaantota kanaaf kennaa ture, sun garuu furmaataa waaraa waan hin taaneef gara biyya isaniitti debisuu eegalle jedhu.
Godaantonni 2300 ol ta'an kun hundi warra fedhii isaaniin gara biyyaatti deebi'uu barbaadan akka ta'anis himaniiru.
Hojiin godaantota kanneen gara biyyaatti deebisuu Kibxata akka eegaleefi marsaa duraan namoonni 120 ol Itoophiyaatti deebifamuu himaniiru.
Kaleessa [Roobii] hojichi itti fufuu qaba ture garuu sababa rakkoo nageenyaa Sudaan turen adda cituu fi marsaa lammataan har'a [Kamisa] irraa egalee namoonni gara Itoophiyaatti akka deebifaman himaniiru.
Akka karoora dhaabbatichaatti guyyaatti balaliinsa lama ykn sadiin guyyoota 8 hanga 9 dhufan gidduutti godaantota hunda gara biyyaatti deebisu.
Haa ta'u malee buufataa xiyyaaraa Adan Yaman keessa jiru kan bulchitu 'Yunaayitid Arab Emirates' torbanitti balaliinsa tokko qofa yaada jedhu waan qabaniif akkas yoo ta'e hanga baatii 4 fudhachuu akka danda'us ni himu.
Haala amma keessa jiraniin godaantota kanaaf baatii 4 turuun daran rakkisaa ta'uus ni himu.
Dhaabbatichi biyyatti deebisuu qofa osoo hin taane erga biyyatti deebi'anii booda akkaataa itti hawaasatti makamaniifi jiruu horatan gochuuf sagantaa qabaachuu Aadde Oliviyaan ni dubbatu.
Irra caalaan isaanii Naannoo Oromiyaa irraa kan buqqa'anidha kan jedhan Oliviyaan, gara naannoo itti dhalataniitti akka deebi'aniifi hawaasa isaanii keessa akka jiraatan taasifna jedhu.
Kanneen reebichii fi miidhaan adda addaa irra gaheef tajaajila gorsaa akka kennanis ni dubbatu.
Haa ta'u malee gama deeggarsa akkasii kennuun hanqina fandii akka qabanis ni himu.
Aanga'oonni Yaman godaantota ragaa seera qabeessa nalee gara biyyattii galan irratti to'annoo jabaa taasisuu erga eegalee bubbuleera.